२३ औ जनयुद्ध दिवसको जिम्मा ओलीलाई खुल्लामञ्च देखी पेरिसडाँडा सम्म - TV Annapurna
२३ औ जनयुद्ध दिवसको जिम्मा ओलीलाई खुल्लामञ्च देखी पेरिसडाँडा सम्म
तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध शुरू गरेको आज २३ वर्ष पूरा भएको छ । जनयुद्ध शुरू गरिएको सम्झनामा आज विभिन्न समूहमा रहेका माओवादीले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेर जनयुद्ध दिवस मनाउँदैछन । यता जनयुद्धका सुप्रिमो प्रचण्डले र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर जनयुद्धको श्राद्ध गर्ने तयारीमा छन ।
१९ बर्षे शसस्त्र जनयुद्धपछि माओवादी पार्टीमा थुप्रै परिवर्तन आए भने देशले पनि परिवर्तनको फड्को मारेको छ । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको छ र मुलुक संघिय सरचनामा गएको छ । लामो समयदेखी हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेश तथा प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनपछि सरकारसमेत बन्ने क्रममा छ यतिबेला । अझै यो भन्दा महत्वपूर्ण त माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले जो जनयुद्धको सवालमा ठिक दुई धु्रबमा थिए तिनै दुई दलका अध्यक्षद्धयले यो बर्षको जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रममा संयुक्त सम्बोधन गर्ने भएका छन । यद्यपि जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका शहिद परिवार बेपत्ता र घाईतेहरुले भने जनयुद्धको उद्देश्य यति मात्र थिएन भन्दै यसको तीब्र आलोचना गरिरहेका छन ।
२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि शुरू भएको १० वर्षे जनयुद्धको स्मरणमा जनयुद्ध दिवस मनाइने गरिएको छ । शुरूशुरूका दिनमा खुलामञ्चमा यो दिवस भव्यरूपमा मनाइन्थ्यो भने अहिले पार्टी कार्यालयको एउटा कोठामा सीमित भएकोे छ । २०५२ साल फागुन १ गते रोल्पा, सिन्धुली र गोरखाका प्रहरी चौकीमा एकैसाथ हमला गरी सशस्त्र युद्धको शुरूवात गरिएको थियो । त्यसपछि १० वर्षसम्म निरन्तर चलेको माओवादी जनयुद्धमा १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने हजारौँ घाइते र बेपत्ता भए । यता माओवादी पनि विभिन्न टुक्रामा बाँडिए । जनयुद्धको थालनी गर्ने मुख्य व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) छ । माओवादीबाट अलग भएर डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति नेपाल गठन गरेका छन । सोही पार्टीबाट अलग भएर मोहन वैद्य किरणले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) छ भने र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पनि माओवादीबाट अलग भएर नेकपा (माओवादी) पार्टी अहिले सबैभन्दा क्रान्तिकारी देखिएको छ । यसरी चारवटा पार्टी अहिले क्रियाशील छन् । जनयुद्धबाट आएका यी नेताले अलग अलग पार्टी बनाएका छन् र जनयुद्ध दिवस पनि अलग अलग मनाइरहेका छन् । २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आयो ।
दश वर्ष सशस्त्र युद्धमा बिताएका माओवादीले दशै वर्ष शान्ति प्रक्रियामा पनि बिताए । अझ पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको छैन । प्रचण्डको नेतृत्वमा दुईपटक र डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एक पटक सरकार बनेको छ । दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभएका प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीका भातृसंगठनाले केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा एक कार्यक्रम गरी जनयुद्ध दिवस मनाउने भएको छ । जसमा एमाले अध्यक्षलाई समेत सम्बोधन गर्न निम्ता गरिएको छ । जनयुद्धको मर्म र लक्ष्य पूरा नभएको ठान्ने नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले पनि जनयुद्ध शुरू भएको दिनलाई महत्व दिएको छैन । सो पार्टीले जनयुद्ध दिवस पार्टी कार्यालयमा सामान्य ढङ्गले मनाउने तयारी छ ।
फेरि जनयुद्धमा जाने उद्घोषका साथ नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव ‘एकीकृत जनक्रान्ति’को नामबाट सङ्घर्ष गर्दै आएका छन । तर विप्लवको समेत यो जनयुद्धमा बिशेष कार्यक्रम छैन । दश वर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व तहमा भूमिका निर्वाह गरेका डा. भट्टराईले माओवादीबाट अलग भएर नयाँ शक्ति नेपालको संयोजक बनेर राजनीतिमा सक्रिय छन । माक्र्सवाद र माओ विचारधारा पुरानो भयो भन्दै आर्थिक क्रान्तिका लागि नयाँ शक्ति नाम दिएर पार्टी खोलेका डा. भट्टराईले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा कुनै कार्यक्रम राखेका छैनन । दश वर्षसम्म जनयुद्धमा बलिदानी दिन तयार आम कार्यकर्तादेखी माओवादीका नेताहरू नै त्यसको उद्देश्य पूरा नभएको भन्दै आएका छन ।
शिवरात्रीमा प्रहरीले गहना लुट्न सक्ने भन्दै पक्राउ गर्ने नँया योजना